ramkrishna January 23, 2021	धनी बन्नका लागी रतन टाटाले दिएका १० प्रभावकारी टिप्स
४. के तपाईंलाई थाहा छ, रतन टाटाले पढाई पूरा गरेपछि जब काम सुरु गरे तब उनको पहिलो काम के थियो ? उनी टाटा स्टिलको ब्लास्ट फर्नेसमा कोइला र चुन ढुङ्गा फ्याँक्ने काम गर्दथे । तर उनले यो कामलाई निकै दृढताका साथ गरे र आज उनी कहाँ पुगेका छन् त्यो हामीलाई थाहै छ । त्यसकारण रतन टाटा सधैं यो मान्छन् कि कुनै पनि काम सानो र ठूलो हुँदैन । मात्र व्यक्तिले आफ्नो कामलाई पूरा दृढता र आनन्दपूर्वक गर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, जीवनको बाटोमा थुप्रै बाधा व्यावधान आउँछन्, यसबाट पछि हट्नुको साटो त्यससँग जुघ्नुपर्छ ।
Previous Previous post: भयङ्कर चलाख र बुद्धिमान हुन्छन् यी राशिका महिलाहरु, तपाई पनि पर्नुभयो कि ?
Next Next post: महको फाईदा सेवन गर्न जाने अमृत नत्र बिष